Nezvedu - Linyi Juda Science uye Technology Environmental Dziviriro Injiniya Co., Ltd.
Linyi Juda sainzi uye tekinoroji kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza injinjiniya co., Ltd.i fekitori ine nhoroondo yemakore anopfuura makumi matatu, inonyanya kuita zvekuchengetedza zvakatwasuka lime kiln, huni yevira inotsigira michina, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza guruva kubvisa michina uye otomatiki kudzora system, nezvimwe.
Kambani yedu yakahwina kutendwa neruzhinji rwevatengi kuburikidza neyakakwana dhizaini dhizaini, yakanakisa zvigadzirwa, musimboti wekuvaka uye kugona kugona, hwakavimbika mhando yeinjiniya, yakakwira sevhisi uye kuita kwakanaka. Uye zvakare, kambani iyi ine simba rakasimba rehunyanzvi, iine boka revane hunyanzvi hwekugadzira dhizaini uye kuvaka, michina yekumisikidza michina, otomatiki kudzora system kugadzirisa uye zvimwe zvinhu zvekuwana kwakanyanya kweinjiniya nevashandi vehunyanzvi.
Isu tinopa yakazara izere masevhisi kubva kune akazara masikirwo dhizaini, kuvaka projekiti, mechina michina dhizaini uye kugadzira, kune yakazara seti ye otomatiki kemikari kudzora system kumisikidza, pane-saiti kuisirwa uye kutumisa, hunyanzvi hwekudzidzisa vashandi, pamwe nekugadzirisa kwemidziyo.
Zvichienderana nekuvandudza kwedu zvakanakira pairi yekugadzira mutsara, isu tinoshingairira kuunza nyowani tekinoroji yepamusoro uye takagadzira nyowani dzemaimu kiln masitaira senge ma kiln ane gasi semafuta. Iine hupfumi hwenyika hwakawanda, nyika zhinji uye dzakawedzera kudyara kwezvivakwa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, tinoshandisa zvizere mukana wakanaka. Isu tinoteerera zvakanyanya kukurumidza kukora kugadzirwa kwehunyanzvi kugadzirisa, uye edza nepatinogona napo kuva nekufambira mberi kukuru mukushandurwa kwehunyanzvi, hunyanzvi, uye nekuvandudza mhando yehunyanzvi hwekugadzira; uye isu tese takagadzirira kupa vatengi kubva kumativi ese epasi zvigadzirwa nemhando yepamusoro uye neruzha masevhisi. Kubva pakagadzwa, isu tinotenda mhando ihwo hupenyu hwefekitori uye mutengi ndiMwari. Isu tinoomerera pakupa vatengi vedu nehunhu hwakanaka, mutengo wakaringana uye nebasa reinzwi. Uye matekinoroji edu ekugadzira anounzwa kunyika dzinopfuura gumi. Tichasimbisa pakugadzira zvigadzirwa zvakaisvonaka, zvichipa basa rakapedza-kutengesa kune vese vatengi senguva dzose.
Noushamwari vatengi vese kumba nekune dzimwe nyika kuti vashanyire kambani yedu!
Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment, Karusiyamu Hydroxide Equipment, Kugadzira Calcium Hydroxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira,